बिहीबार, २३ मेका दिन भारतीय तल्लो सदन लोकसभा चुनावको परिणाम आउन शुरु भयो प्रधानमन्त्री नेरन्द्र मोदी नेतृत्वको एनडीए गठबन्धनले जितको पारो बढाउदै लग्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस भने खुम्चिदै गयो । यसले मोदीको राष्ट्रवादको चकत्कारका रुपमा हेर्न ढिला गरिएन् । यता सन् २०१४ को चुनावको दाँजोमा धेरै सिट जित्ने अपेक्षामा रहेको कांग्रेस खराब प्रर्दशनबाट गुज्रियो । गान्धी परिवारको राजनीतिक उत्तराधिकारीका रुपमा उदय भएका राहुल गान्धी एक परस्त नेताका रुपमा चुनावले पाखा लगायो । यतिसम्म कि मोदीको प्रचण्ड बहुमतसँग लड्ने सुहाउदो प्रतिपक्षी समेत कांग्रेस बन्न नसकेको टिप्पणी हुन थालेको छ । केहीले त राहुल गान्धी परिवारका अन्तिम उत्तराधिकारी हुने अनुमान समेत गर्न थालेका छन् ।
४८ वर्षीय राहुल गान्धी भारतीय राजनीतिको मियोका रुपमा स्थापित गान्धी बंशका उत्तराधिकारी हुन् । उनका हजुरबुवा नेहरु भारतको पहिलो र लामो समयसम्म कुशलतापूर्वक प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्ने व्यक्ति थिए । हजुरमा इन्दिरा भारतको पहिलो महिला प्रधामन्त्री भइन् र राहुलका बुवा राजीव गान्धी युवा उमेरमा भारतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । भारतको राजनीतिमा गान्धी परिवारको आ–आफ्नो राजनीतिक देन र इतिहास पनि कायम छ । सन् २०१४ मा गान्धी बंशको उत्तराधिकारीका रुपमा राजनीतिमा आएका राहुलले दुवै चुनावमा नराम्रो पराजय सहनु परेको छ । बिहीबार प्राप्त मत परिणामले गान्धीलाई दोस्रो हारको झड्का दिएको छ । कांग्रेसले केवल ५२ सिटमा जित हासिल गरेको छ । मोदी नेतृत्वको भाजपाले ३ सयभन्दा वढी सिटमा विजय हासिल गरेको छ । यो पल्ट राहुलले छ पटक चुनाव जितेको खानदानी सिट अमेठी समेत गुमाउनु परेको छ । अमेठी कांग्रेसका लागि ऐतिहासिक सिट भएपनि राहुलले त्यो साख जोगाउन सकेनन् ।
अमेठीमा उनको बुवा राजीव र आमा सोनिया दुवैले चुनाव जितेका थिए । यसअघि राहुलले पनि त्यही क्षेत्रमा चुनाव जितेका थिए । चुनाव अघि राहुलले प्रत्येक अमेठीबासीलाई विशेष पत्र पठाएका थिए । पत्रमा लेखिएको थियो‘मेरा अमेठी परिवार ।’ तैपनि उनले चुनाव जितेनन् । अभिनेत्रीबाट नेता बन्न आएकी वीजेपीकी केन्द्रीय मन्त्री स्मृति इरानीले राहुलाई पराजित गरिन् ।
अमेठी त्यस्तो चुनाव क्षेत्र हो जसलाई भारतीय राजनीतिको सूचकका रुपमा हेरिन्छ । अमेठी उत्तर प्रदेशको मुटु हो । यूपीमा ८० सिट छन् । भारतमा यूपीलाई दिल्लीको राजनीति जाँच्ने परीक्षण केन्द्र पनि मानिन्छ । भारतमा आम मान्यता के छ भने जसले अमेठी जित्छ,उसले उत्तर प्रदेशको नेतृत्व लिन्छ र जसले यूपी जित्छ उसले देशमै राज्य गर्छ । यो मोदीको हकमा समेत सत्य सावित भएको छ ।
भारतमा भएका १४ प्रधानमन्त्री मध्ये ८ जनाले अमेठीबाटै चुनाव जितेको इतिहास छ । राहुलका हजुर बा,हजुर मा (इन्दिरा) र बुवा यहीबाट चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री भएका थिए । गुजरातका नरेन्द्र मोदीले पनि सन् २०१४ मा युपीकै वाराणसीमा चुनाव लडेँ । यसपल्ट पनि त्यही सिट रोजेँ र विजयी भए । कसैले पनि टिप्पणी गरेका थिएन कि कांग्रेस चुनाव जित्दै छ भनेर तर विगतको भन्दा सुधार गर्ने अपेक्षा थियो । तर,नतिजा उसको पक्षमा आएन ।
राहुल गान्धी आफूले त चुनाव जिते । तर, पार्टी नराम्ररी हार्यो । त्यतिमात्र होइन अब बहस शुरु भएको छ, के राहुल गान्धी परिवारका अन्तिम उत्तराधिकारी हुन् ? वा कांग्रेसलाई जीवन दिनका लागि गान्धी परिवारबाट नेतृत्व बाहिर आउनु पर्छ ?
हारपछि राहुलले पत्रकार सम्मेलन गरेर मतदातालाई धन्यवाद दिएका छन् । उनले हारको जिम्मेवारी लिने घोषणा पनि गरेका छन् । उनले हार स्वीकार्दै विजपीले पाएका जनमतको सम्मान गर्दै बधाइ दिएका छन् ।
अमेठीमा भोट गणना सकिएकै थिएन् । ३ लाख भोट गन्नै बाँकी हुँदा राहुलले हार स्वीकार्दै स्मृतिलाई ‘अमेठीका ख्याल रखना’ भने । ‘म उनलाई धेरैधेरै बधाइ भन्न चाहन्छु, उनी जित्दै छिन्,लोकतन्त्रमा जनमतको फैसललाई सम्मान गर्छु’राहुलले सन्देशमा भनेका थिए ।
कांग्रेसको हारबारे उनी धेरै खुलेनन्, कहाँ कमजोरी भयो कार्यसमिति बैठकमा त्यसको समीक्षा हुने बताए । उनले आफू फेरि पनि जनतमा जाने मेहनत साथ जनताका सुखदुखमा साथ दिने र अन्ततःजित आफ्नै हुने विश्वास पनि राहुलले व्यक्त गरेका छन् । तर,कांग्रेस भित्र नेतृत्वको भन्दा अरु नै वहस चुलिन थालेको छ । नेतृत्वको विषयलाई लिए । पार्टीका एक नेताले भने ‘हाम्रो विश्वसनीयता निकै घटेको छ,मान्छेहरूले हाम्रो भरोसा गर्न छोडेका छन,हामी जे भन्छौ त्यसमा उनीहरु विश्वास गरिरहेका छैनन् ।’ ‘मोदीले जनतासँग गरेका कुनै वाचा पूरा गरेका छैनन् तैपनि मान्छेहरू उनलाई विश्वास गरिरहेका छन् ती नेताले’ प्रश्न गरे । किन यस्तो भइरहेको छ त भन्ने प्रश्नमा ती नेताले भने,‘यस्तो किन भइरहेको छ थाहा छैन ।’
चुनावी राजनीतिमा कांग्रेसको खराब प्रर्दशनको टिप्पणी गर्दा नेतृत्वसँग सवाल ठोक्किन्छ । कतिपय विश्लेषक राहुलको क्षमतमा प्रश्न गर्दै छन् र नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि दबाव दिइरहेका छन् । राहुलले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने वहस पनि हुन थालेको छ । तर,यो सबै पार्टी भित्रबाट भन्दा पनि वाहिरबाट धेरै उठेको सुनिन्छ । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता मणिशंकर अध्यर भन्छन्‘कांग्रेस आफ्नो नेतृत्वमाथि सवाल गर्दैन,यदि राहुलले राजीनामा दिएपनि स्वीकार गर्ने छैन ।’ पार्टी हारको कारक नेतृत्व होइन उनले भने,‘हारको कारण अरु नै छ,जसको हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ ।’
लखनऊका पार्टी प्रवक्ता विजेन्द्र कुमार सिंह भन्छन,‘समस्या पार्टी नेतृत्वको होइन गलत चुनावी मुद्दा हो ।’पार्टीको आन्तरिक संरचनामा पनि केही खराबी छ,नेताहरूको अन्तरघात पनि यसको कारक छ,चुनावी अभियान नै ढिला शुरु गरियो,अर्को क्षेत्रीय दलहरूसँगको गठबन्धन,यूपी र विहारमा यो निकै घातक थियो र भयोे पनि ।’
चुनावी हारलाई कांग्रेस नेताहरूले नेतृत्वलाई दोष दिएका छैनन् । बरु पार्टीलाई नयाँ ढाँचामा कसरी लैजाने र चुनावी अभियानमा कहाँ कमीकमजोरी भए त्यसको लेखाजोखा गर्नुपर्नेमा उनीहरु लागि परेका छन् । बिबिसी हिन्दीबाट अनुवाद
प्रकाशित ११ जेष्ठ २0७६ , शनिबार | 2019-05-25 05:19:16